Ividiyo: I-Adobe's Marketing BS Detector | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 25, 2012 NgoLwesithathu, Oktobha 24, 2012 Douglas Karr
Ndiyithande ngokupheleleyo le vidiyo kunye nephulo, Ukuthengisa yi-BS, Ukusuka kwiAdobe yokukhuthaza Ilifu lokuThengisa leAdobe. I've written my own posts in the past about Intengiso thetha… Kwaye isandiqhuba ngamandongomane ngokupheleleyo.
I-Adobe Marketing Cloud ikunika iseti epheleleyo ye- kubahlalutyi, kwezentlalo, kwintengiso, ekujoliseni nakwizisombululo zolawulo lwamava ewebhu kunye nedashboard yexesha lokwenyani elidibanisa yonke into oyifunayo malunga namaphulo akho okuthengisa. Ke unokufumana ukusuka kwidatha uye kukuqonda ukuya kwisenzo, ngokukhawuleza nangobukrelekrele kunangaphambili.
tags: bs isixhobo sokujonga izintoUkuthengisa bsingxoxo yentengisoUkuthengisa yi-bsIilwimi zentengisoukuthengisa i-verbiageamagama okuthengisa
Imithombo yeendaba kwiNtlalo yeDrive Revenue